Real Madrid Oo Doonaysa In Ay January U Dhaqaaqdo Wilfred Ndidi
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo doonaysa in ay January u dhaqaaqdo Wilfred Ndidi
November 12, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso in ay sahamiso suurtogalnimada ay kula soo saxiixan karto xiddiga khadka dhexe uga ciyaarakooxda Leicester City ee Wilfred Ndidi inta lagu guda jiro suuqa January.
24-sano jirkaan ayaa 187 kulan u saftay Foxes tan iyo markii uu ka yimid Genk bishii Janaayo 2017, isagoo ka qeyb qaatay sagaal gool iyo 11 caawin.
Manchester United ayaa la rumeysan yahay inay xiiseyneyso xiddiga heerka caalami ee dalka Nigeria, kaasoo 11 kulan u saftay tartamada oo dhan heer naadi intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Fichajes , Real Madrid ayaa dooneysa inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe bisha Janaayo, iyadoo maamulaha Los Blancos Carlo Ancelotti uu u arko bedelka mustaqbalka fog ee Casemiro .
Warbixinta ayaa sheegeysa in dalab gaaraya €60m (£51.4m) ay u badan tahay inay tixgeliso Leicester, iyadoo Foxes ay u muuqato inay wajahayso dagaal sare si ay u xaqiijiso afarta sare ee Premier League xilli ciyaareedkan.
Ndidi, oo dhawaan seegay afar kulan oo Premier League ah dhibaato muruqa ah awgeed, ayaa qandaraas uu ku joogo King Power Stadium ilaa Juun 2024.